zkipster: Ngwọta Ndepụta Ndị Ọbịa maka Ihe Omume na Mgbakọ | Martech Zone
N'uhuruchi onye ọzọ ahụ m lere anya na ihe omume ahụ. Ọ bụ ụdị nhazi… mmadụ ole na ole na-elekọta ya na-achọ ịchụpụ aha m na ndepụta ndị bịara na peeji nke ọtụtụ peeji. Na-ewe nkeji ole na ole iji gụchaa ya, ha mechara chọta aha m wee lelee ya - wee gwa ibe ha ka ha niile nwee ike lelee ya. Na ibu ihe m na-aga, na ndenye ego-ins na-keabiidii… na K na mgbe o yiri ka ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ahịrị! Ndị folks na njedebe nke mkpụrụedemede na-abanye na.
M hụrụ n'anya na e nwere ndị na-ebi n'ụwa na-ekwenye na ndị a bụ nsogbu nke teknụzụ ga-ejizi rụọ ọrụ. Ndị folks na Ogba mere nke ahụ, na-ewu igwe ojii igwe ojii maka mbadamba na smartphones nke na-enye ndị ọrụ mmemme ohere ịchọta ma lelee ndị bịara ya anya. Onye ọ bụla na-enyocha na folks na-akpaghị aka emelitere ebe ọ bụ na ha niile na-arụ ọrụ site na otu ngwa.
Na mgbakwunye, ha nwere atụmatụ mgbakwunye na-enyere aka igbochi ndị aghụghọ ibanye na mmemme gị. Foto na-agbakwunye na ndepụta ndị bịara gị ka ị nwee ike ịchọpụta ha ka ha na-enyocha ihe omume. Nwere ike ịnwe ọkwa izipu usoro mgbe ndị bịara VIP bịara. Ezigbo echiche!
Tags: ndepụta ndị bịarandepụta ndị ọbịaOgba